मंसिर १८, काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको छ ।
सो सडक चालू आवभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ । विसं २०७०/७१ मा सो सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । लामो समयसम्म अवरुद्ध सो सडक निर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको हो ।
आगामी पुससम्म सक्ने गरी पछिल्लो पटक अवधि थप भएको थियो । कोभिड–१९ का कारण निर्माण कार्य हुन सकेको थिएन । निर्माण कार्यमा बाधा पुगेकाले ठेक्का सम्झौता छ महीना थप्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । अहिलेको गतिमा काम हुँदा छ महीना पनि लाग्दैन । उनले भने, ‘छ महीना थप हँुदा असारसम्मको अवधि हुन्छ तर काम त्योभन्दा पहिले नै सकिने देखिन्छ ।’
सो सडकको चौडाइ जम्मा आठ किमी रहेको छ । सात किमी सडकमा कालोपत्र गरिने र एक किमीमा पानी बग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण भएको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए । सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा रहेका संरचना हटाउन समस्या हुँदा पनि विगतमा निर्माणमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नवौँ संशोधनअनुसार गत वर्ष एक वर्षका लागि अवधि थपेको थियो । कोभिडका कारण निर्माण हुन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएकोमा अहिले थप हुँदा पाँच पटक अवधि थप हुनेछ । सडक विभागले अरु कारणले काममा बाधा पुगे पनि निर्माण व्यावसायीकै लापरवाहीका कारण ढिलाइ भएमा जरिवाना गराउने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई रू. तीन करोड ५० लाख जरिवाना गरिएको प्रमुख प्रजापतिले बताए । उनले भने, ‘रकम असुली पनि भइसकेको छ ।’
सो सडक जम्मा रू. ३५ करोडमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म रू. आठ करोड भुक्तानी भइसकेको र बाँकी सात करोड पनि काम भएपछि भुक्तानी गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । भारतको एक्जिम बैंक र सैलुङ निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणको काम गरिरहेका छन् । निर्माण शुरु भएको लामो समयसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासीसँगै नगरकोट घुम्न पुग्ने पर्यटकले समेत कष्ठकर यात्रा गर्नुपरेको थियो ।
भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्ड अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि सडकमा ग्राभेल उम्किँदै गएपछि खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । उकालो सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सडकमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयवासीले पटक–पटक विरोध पनि गरेका थिए । रासस